Rivaroxaban poda (366789-02-8) hplc≥98% | AASraw R&D Reagents
/ Products / MaR & D Reagents / Rivaroxaban powder
Rating: SKU: 366789-02-8. Category: MaR & D Reagents
MUTSVENE unobatanidzwa uye unokwanisa kugadzira kubva ku gram kusvika kuhutano hweRivaroxaban powder (366789-02-8), pasi peCGMP mutemo uye trackable quality control system.
Molecular Kurema: 435.88
Color: Muchena kuchena kwehupfu
Rivaroxaban Powder use
Rivaroxaban powder is anticoagulant uye yekutanga yakashanda mumuromo kana Xa inhibitor. Kusiyana nefarfarin, nguva dzose basa rekuongororwa kweInR harisi kudiwa. Kunyange zvakadaro hapana antidikote inowanika muitiko rekubuda ropa. Chete 10 mg tablet inogona kutorwa pasina hanya nezvokudya. I15 mg uye 20 mg tablet inofanira kutorwa nechingwa.
Chiitiko chakakomba zvikuru chinokonzera ropa, kusanganisira kukanganisika kwemukati mukati. Rivaroxaban powder inosanganiswa nemaitiro mashoma ezviitiko zvakakomba uye zvinouraya zvinouraya kupfuura warfarin asi zvinosanganiswa nemazinga akawedzerwa ekubuda ropa mumutambo wepamuviri. Ikozvino haisi mishonga yeRivaroxaban powder (kusiyana nemfarfarin, iyo inogona kuderedzwa ne vitamin K kana prothrombin complex concentrate), zvinoreva kuti kubuda kwakanyanya kunogona kuoma kubata.
Muna Gumiguru 2014, Portola Pharmaceuticals yakapedzisa Phase I uye II mishonga yemakiriniki uye eexanet alfa semushonga we Factor Xa inhibitors ane zvishoma zvinokuvadza, ndokutanga Phase III miedzo. Andexanet alfa inotarisirwa kugamuchirwa mu 2016. Sezvo ye2017, chikwata chacho hachina kubvumirwa neU.S. Food and Drug Administration.
SezvaA2015, kuongorora kwemashure kwekutengesa kwakaratidza chiropa chekutyisa, uye zvimwe zvidzidzo zvinodiwa kuti zvienzanise ngozi. Chirwere ichi chinopesana nevanhu vane chirwere chakakomba chechiropa uye chirwere chepfungwa chekupedzisira, mune uyo mushonga wacho usina kuiswa.
Rivaroxaban powder ine bhokisi rinonyeverwa kuti rijekese kuti vanhu vanoshandisa mushonga havafaniri kuregera vasati vachitaura nehutano hwavo hwehutano, nokuti inogona kuwedzera njodzi yekurohwa.
Muna 2015, Rivaroxaban powder yakaverenga nhamba yepamusoro yezviitiko zvekukuvara kwakakomba pakati peanowanzo tariswa madhiragi kune iyo FDA's Yakashata Zviitiko Zvekuzivisa System (AERS).
Rivaroxaba yakatanga kugadzirwa naBayer., Inoratidzwa yekudzivirira venous thromboembolic zviitiko (VTE) muvarwere vakawana chiuno chose kutsiva uye zvachose mabvi kutsiva; kudzivirira sitiroko uye systemic embolism mune varwere vane nonvalvular atrial fibrillation; kurapwa kweakadzika vein thrombosis (DVT) uye pulmonary embolism (PE); kudzikisa njodzi yekudzokorora DVT uye / kana PE. Nekuda kwekushomeka kwezvidzidzo zvekuchengetedza, hazvikurudzirwe kuti ushandise mune avo vari pasi pemakore gumi nemasere. Kushandiswa kwaro hakukurudzirwi kune avo vane kukanganisika kukuru kwetsvo (<18mL / min).
Rivaroxaban powder is anticoagulant uye yekutanga yakashanda mumuromo kana Xa inhibitor. Kusiyana nefarfarin, nguva dzose basa rekuongororwa kweInR harisi kudiwa. Kunyange zvakadaro hapana antidikote inowanika muitiko rekubuda ropa. Chete 10 mg tablet inogona kutorwa pasina hanya nezvokudya. I15 mg uye 20 mg tablet inofanira kutorwa nechingwa. FDA yakagamuchirwa munaJuly 1, 2011.
Iyo inowanzonzi yechipfuva-migumisiro inopa ropa, kusanganisira yakanyanya kubuda kweropa iwe unowana chero ipi zvayo yezviratidzo izvi kana izvo zvakanyorwa muchikamu CHINOKOSHA CHINOKOSHA, tumira chiremba wako pakarepo:
Kuenda kumwedzi kunorema kubuda
kubuda kubva kumadzimai ako
kunyorera kana kushambidza ropa kana zvinhu zvakaratidzika semafisi efivha
ropa, dema, kana tarry zvigaro
pikinki, kana urinha
chizoro kana kupera
kurwadziwa muhudyu kana pamakumbo
kunetseka kufema kana kumedza
kurwadziwa kana kupfugama pazvivande
Rivaroxaban powder ichangobva kuumbwa muromo anticoagulant uye zvakananga Factor Xa inhibitor iyo inoshandiswa mukudzivirira kurwara uye kuputika kwepenzi mune varwere vane chirwere chisingaperi chetrial fibrillation, uyewo kurapwa nekudzivirira kwehutachiona hwehutachiona uye hwemapurmoni embolism. Rivaroxaban powder yave ichibatanidzwa nehutachire hwezinga re enzyme ye-serum panguva yekurapa uye nezvisingawanzoitiki zvechipatara zvinokonzerwa nechiropa ne jaundice.
varoxaban inoratidzirwa yekudzivirira venous thromboembolic zviitiko (VTE) muvarwere vakawana chiuno chakazara kutsiva uye zvachose mabvi kutsiva kuvhiya; kudzivirira sitiroko uye systemic embolism mune varwere vane nonvalvular atrial fibrillation; kurapwa kweakadzika vein thrombosis (DVT) uye pulmonary embolism (PE); kudzikisa njodzi yekudzokorora DVT uye / kana PE. Nekuda kwekushomeka kwezvidzidzo zvekuchengetedza, hazvikurudzirwe kuti ushandise mune avo vari pasi pemakore gumi nemasere. Kushandiswa kwaro hakukurudzirwi kune avo vane hutachiona hwakakomba (<18mL / min).
Nzira yekutenga Rivaroxaban powder kubva kuAASRAW